မကောင်းတဲ့အတိတ်မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မကောင်းတဲ့အတိတ်မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
Posted by aye.kk on Oct 4, 2017 in My Dear Diary | 14 comments
အကောင်းစိတ်,အဆိုးစိတ်တွေအတိုင်း၊ ပြုမူဆောင်ရွက်မိကြလို့ သာ
အခုတော့လည်း နောင်တချိန် ပြန်တွေးရင် တွေးလို့ကောင်းမယ့်အတိတ်တွေပဲ ကျန်အောင်
ဒီလို စက်မှု၊နည်းပညာနဲ့ ဇီဝသိပ္ပံခေတ်ကြီးမှာ.. မကောင်းဘူးထင်ရတဲ့အတိတ်တွေဖျောက်လို့ရနေပါပြီ..။
ဆေးသောက်ဖျောက်မလား..။ လျှပ်စီးခေါင်းအုပ်လေးထားပြီး.. အဲဒီမှတ်ဥာဏ်နေရာကို.. ရှော့ရိုက်ဖျောက်မလား.. ကြိုက်တာရွေးပါ..။
FIONA MACDONALD 15 FEB 2016
We all have things in our past that we’d like to forget – bad break-ups, traumatic experiences, loss. No matter how hard we try, these memories can continue to haunt us, occasionally triggering conditions such as anxiety, phobias, or post-traumatic stress disorder. But scientists are now on the verge of being able to change that for good, with the discovery that our memories aren’t as permanent as we once thought.
၀ိပဿနာရှုနည်း.. တရားထိုင်နည်းတွေကို ဗုဒ္ဓဟောသွားတယ်လို့.. မယုံကြည်တာမို့.. ပိဋကတ်၃ပုံထဲ.. သွားရှာတော့လည်း.. ဓမ္မက္ခန္ဒာ ၈သောင်းလေးထောင် ထဲ..နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့် တခုတည်းသောလမ်း.. ၀ိပဿနာ ဆိုတဲ့..စာလုံး၁၅လုံးလားပဲတွေ့..။
အဆင့်ဆင့်.. အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီးတို့..။ ဦးဘခင်တို့…. ဦးဂိုအင်ဂါတို့ကတဆင့်.. မြန်မာထေရာဝါဒသမားတွေသာ တော်တော်များများ.. လုပ်နေကြတာပေါ့..။
အာနာပါနအနေနဲ့.. ဟိန္ဒူတွေ.. ကျင့်ကြတဲ့အရေအတွက်ကတော့ ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်..။
.. တလက်စထဲ.. အမဲသားပါရှောင်မှ ပိုထိရောက်မယ်လို့ပါ..။
+၁ ပေးလိုက်ပါတယ် အရီးအေးရေ..။
စာတွေ့အရကတော့.. အဲဒီ၃ပါးကို (တကယ်)တကယ်ယုံကြည်သူဟာ.. သောတာပန်တည်တာပဲ..။
ဆိုတော့ကာ…..သူကြီးပြောပုံအရဆိုရင် ဗြိတိသျှခေတ် မတိုင်မီက
ဝိပသနာ တရားအားထုတ်နည်းဆိုတာ မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်။ မသိလို့။
ဒါဆို ဝိပသနာ ဆိုတာ ပေါ်လာတာ မကြာသေးတဲ့ မော်ဒန်ပဲ
ဟိန္ဒူသာသနာမှာက.. အသက်ရှု၊ ဖေါင်းပိန်ထိုင်ထိအပါအ၀င်… ရုပ်စိတ်နာမ်တွေကို ခွဲဖြာစိတ်စီကျင့်တာ.. ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကထဲကရှိပြီးသား.. ရှိနေဆဲ.. ရှိလတ္တံ့ပါ..။
အမေရိကားမှာလည်း.. အဲဒီ မက်ဒီတေးရှင်းနည်းပေါင်းစုံကို.. ဟိန္ဒူဆြာကြီးတွေ ပိုက်ပိုက်ယူ..နည်းပြတဲ့သင်တန်းတွေ အများးးး ကြီးရှိပါတယ်..။
အဲ.. မြန်မာမှာကျတော့.. ၀ိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာက.. လယ်တီဆတော်ကြီးရှေ့မယ်..ပုဂံခေတ်.. အင်းဝ..ကစလို့..ကုန်းဘောင်ခေတ်အထိ.. ၀ိပဿနာတရားစခန်းတွေလည်းမရှိ..။
နာမယ်ပြောင်းထားတဲ့.. လယ်တီဆတော်ကြီးမူပိုင်ဖြစ်ပါ၏… လို့ပဲ..။
ကင်းဝေးအောင် နေချင်ပေမည့် အတိတ်ဆိုတာ မေ့မရဘူးလေ …
အဲသည့်တော့လည်း ပြန်သတိရတိုင်း နောင်တတွေရ …
သဂျီးပြောသလို ရှော့လည်းမရိုက်ရဲတော့ သေခါနီး အဲသည့် “ဇော” တွေမကပ်အောင် …
ငါလုပ်ခဲ့တာ အကုန်မှန်တယ်လို့ စိတ်ထားရမလိုလို …
ငွင်း … ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ရှုမှပဲ… အပမ္မာဒေထ …
ရှော့မရိုက်လည်း.. သောက်ဆေးနဲ့ရပြီတဲ့..။ The Forgetting Pill တဲ့..။
မှားခဲ့တာတွေကို.. နောင်တမရချင်ရင်.. ဖွင့်ဟ၀န်ခံရတယ်တဲ့..။
AUTHOR: JONAH LEHRER. JONAH LEHRER	MAGAZINE DATE OF PUBLICATION: 02.17.12.
“မှားခဲ့တာတွေကို.. နောင်တမရချင်ရင်.. ဖွင့်ဟ၀န်ခံရတယ်တဲ့..”
ဟီ ဟိ … “မင်း လာပြန်ပြီလား” လို့ ဘုန်းကြီးက ဟောက်လွှတ်မှာ…
အတည်ပြောရရင် ဆေးစွဲ အရက်စွဲ မူးယစ်သမားတွေက အတိတ်ကို မေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လမ်းလွဲကုန်ကြတာ ။ High ဖြစ်နေချိန်မှာ မေ့ချင်တာတွေမေ့ပြီး အကုန် မှန် သွားတယ် … လက်တွေ့
ခရစ်ယန်ဘုန်းကြီးဆီသွား.. confession လုပ်ပေါ့..။
ဆိုတော့… မူးယစ်ဆေးက.. ဓာတုဆေးဝါးမို့… ၀ယ်ရတာ ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်လေ..။
ပိုက်ပိုက်မကုန်ပဲ.. အဲဒီမူးယစ်ဆေးရဲ့ ကမ်မစ်ကယ် အလိုလိုထွက်လာတဲ့.. ယောဂကျင့်ကြည့်ပါလား..။
Of course, it’s more complicated than that. There are other chemicals and receptors at play, and, of course, mystical experience happens without drugs — through prayer, meditation, chanting and fasting.
But Griffiths says this study will open new vistas into the science of spirituality. Until now, he says, we couldn’t systematically study mystical states.
လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီလိုအတိတ်လေး ရှိစေချင်ပါတယ်။